Qalabka Rinjiga SAI: Barnaamijka ugu fiican ee sawir qaadayaasha? | Abuurista khadka tooska ah
Qalabka Rinjiga SAI: Barnaamijka ugu fiican ee sawir qaadayaasha?
Fran Marin | | Design Graphic, Qalabka Naqshadeynta
Waxaa jira noocyo kala duwan oo software ah oo loogu talagalay ka shaqeynta goobta muuqaalka, laakiin dhammaantood ma bixiyaan sifooyin isku mid ah ama waxaa loogu talagalay noocyo shaqo oo isku mid ah. Caqli ahaan kuwan beddelkaas waxaan ka heli karnaa Adobe Photoshop iyo walaalkiis Illustrator laakiin maanta ma jecli inaan ku istaago guriga Adobe oo aan u hibeeyo maqaalkan si aan uga hadlo barnaamij aad u wanaagsan oo awood badan oo Jabbaan ah, oo aan ka qoomameynno, aan dhowaan la cusbooneysiin, in kasta oo aysan ahayn tan awadeed mar dambe kama mid aha kuwa ay adeegsadaan bulshada sawir qaadayaasha iyo rinjiyeyaasha dijitaalka ah
Rinjiga Qalabka SAI wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Jabbaan waxaana loo isticmaali karaa dhammaan noocyada shaqada laga bilaabo sawirada sawirada majaajillada illaa sawirro macquul ah. Kani ma barnaamijka ugu fiican ee sawir qaadayaasha iyo farshaxanada garaafyada ah? Hadduusan ahayn tan ugufiican, haa bedel beddel ah oo ay tahay inaad ogaato.
Isku xidhka 'SAI interface' waa mid aad u iftiimaya kaas oo noo ogolaanaya inaan ku bilowno arjiga dhowr ilbiriqsiyo oo aan ula shaqeyno si habsami leh oo dhaqso leh. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan la shaqeyno dukumiintiyo dhowr ah iyo feylal isku mar ah, oo aan u dhigno sida sabuurado sida ku xusan baahiyaheena.
Fursadaha wax is daba marin iyo shaqaduba waa kuwo aan xad lahayn inkasta oo haa, waxaa loogu talagalay inay la shaqeyso a kiniin garaafyada. In kasta oo ay na siiso suurtagalnimada la shaqeynta jiirkayaga, in badan oo ka mid ah astaamaheeda muhiimka ah ayaa lumay, sida suurtagalnimada in la xakameeyo cadaadiska iyo cabirka istaroogkeenna iyo istaroogyadeena.
Shiraacada sawirka waa lagu soo dhaweyn karaa, la weyneeyn karaa ama waa lagu rogi karaa iyadoo la adeegsanayo kuwa soo jiidaya inkasta oo aan sidoo kale awoodno tuuryo leh kumbuyuutarkeena si hawsha looga dhigo mid dhakhso badan oo dhaqso badan. Intaa waxaa sii dheer waxaan sidoo kale helnaa qalab aan ku rogno aragtida hore ee sawirkeena annaga oo aan dhab ahaantii rogin ama aan beddelin faylka.
Marka laga hadlayo isku darka midabada waxaan helnaa guddi noo ogolaanaya sameysano waraaqo noo gaar ah oo ku keydi iyaga guddiga isku dhafka ah ee u dhexeeya kalfadhiyadayada shaqada.
Mid ka mid ah qodobbada ugu adag ee aan ka helo arjiga ayaa ah noocyo kala duwan oo qalab sawir ah ka kooban. Kuwaas waxaa ka mid ah midabbada biyaha, qalimaanta, calaamadaha ama buraashka hawada ee u oggolaanaya deg deg deg deg deg deg deg deg ah oo fududayn iyo keydin. Waxay kaloo leedahay labada qalab ee loogu shaqeeyo pixels ama aalado vector ahaan. Labada noocba waxaa loo qaabeyn karaa inay noqdaan kuwo u nugul cadaadiska qalinkeena. Khibradeyda la shaqeynta sawirada, aaladaha shaqada ee barnaamijkaan bixiyo waa kuwo tayo sare leh waxayna noo ogolaaneysaa inaan isku dhafanno midabkeena iyo midabkeena si qumman iyada oo aan loo baahnayn qalab aad u tiro badan iyo iyada oo aan loo baahneyn in lagu dalbado tiro badan oo hagaajin ah buraashkeena ( sida tusaale ahaan ku dhacda Adobe Photoshop). Si loo soo saaro shaqooyin macquul ah ama qaabab qoyan runtii waa wax fiican hadii waxa aan dooneyno ay tahay inaan helno natiijo cadaalad ku dhisan oo aanan heysan waqtiga oo dhan oo aan jeclaan laheyn.
In kasta oo, sidaan dhahno, cusboonaysiintiisii ​​ugu dambaysay la sameeyay waqti hore, waxay leedahay qaab shaqo oo noo oggolaanaysa inaan ku muujinno lakabyo si gooni gooni ah iyo sidoo kale inaan iyaga u kooxeyno iyo sidoo kale inaan u abuurno waji-gooyo si fudud adigoo isku xiraya. Sidan ayaa ah hawlaha hadhka iyo xoqidda ayaa si dhakhso leh u socda. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan wax ka bedelno habsami u socodka istaroogkeena oo aan saameyn ku yeelano dhaqdhaqaaqa qalinka iyo cadaadiska si loo beddelo dhacdadiisa sawirka.
Xulashada xulashada SAI waxay soo bandhigeysaa aaladaha caadiga ah sida halbeegga xulashada fudud, lasso ama wadka sixirka. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa qalab xulasho burush ah oo si buuxda loogu qaabayn karo sida burushka oo kale. Dhammaantood waa loo qaabeyn karaa inay leeyihiin antialiasing.
Waa inaan maskaxda ku haynaa in barnaamijkan loo qaabeeyay loona sameeyay qaabaynta iyo rinjiyeynta, sidaa darteed waxaa jira aalado gaar ah oo aan la heli karin sida lakabyada qoraalka, jaangooyooyinka ama qalabyada lagu dhejiyo qaababka. Dhammaan waxyaalahan dhammaantood waxaa lagu soo daraa goor dambe iyo barnaamij kale, mar haddaan ka shaqeynay sawirkeenna ka socda SAI.
Marka la eego xulashooyinka soo-bandhigga, waa inaad ogaataa in SAI dusha sare ee hufan ay cadaan yihiin, marka markaad mashruucaaga ka furato barnaamijyo kale, bandhigga aagaggan hufan wuu ka duwanaan doonaa.
In kasta oo aysan bixin fursadaha daabacaadda, waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu badbaadiyo mashaariicdeenna ballaadhinta adduunka ee la yaqaan ee lagu maamuli karo barnaamij kasta sida .PSD, .BMP ama .JPG marka lagu daro qaabkeeda asalka ah .SAI.
Caqli ahaan, maadaama aysan diirada saarin khalkhalgelinta sawirka ama tafatirka sawirka, hagaajinta kaliya ee ay soo bandhigeyso waa kuwa Brightness - Contrast and Tone - Saturation, marka xulashooyinka kale ee tusaale ahaan ka muuqda Photoshop lama taageerin. Sikastaba xaalku ha ahaadee, is waafajinta weyn ee ay la leedahay barnaamijyada kale ee kale ee software-ka ah waxay ka dhigan tahay in kuwani ay yihiin uun waxyaabo yar yar oo si deg deg ah lagu xallin karo dhib badana aan lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Qalabka Rinjiga SAI: Barnaamijka ugu fiican ee sawir qaadayaasha?
Javi aadanaha dijo
Waxaan haystay muddo dheer waana barnaamij cajiib ah oo lagu sawiro sawirada! :)
Jawaab Javi Humanbeing
Susanna Martinez dijo
Sideen ugu soo dejisan karaa bilaash?
Jawaab Susanna Martínez
Waa inaan isku daynaa, waxay umuuqataa inay lamid tahay ArtRage, marka la soo koobo ... si aan isugu dayno !!
Dhammaan hay'adaha iyo sawir-qaadayaasha doonaya inay ballaariyaan kooxdooda ama, sii daayaan iyaga bisha Janaayo, waxaan kugu martiqaadayaa inaad soo booqato workana.com/agencias :) Xalka hay'adaha iyo soo saarayaasha!
Ku jawaab Constance
Adobe Capture: Sawir adduunka oo loo turjumaa lambarro midab leh
Raúl Martín, sawirqaade Paleontology